Iyo inonzi otomatiki yakadhindisa machina yekunyora nyowani musoro, kazhinji inonzi seyakakwira dhijidhiji yemagetsi ekutsikisa machina, kunyanya servo (PLC) kutonga, dzakasiyana-siyana dzekushanda parameter uye semi-otomatiki yekunyora manzwi zvakagadziridzwa.
(1) Iyo semi-otomatiki yekutsikisa yefoni muchina unowanzo gamuchira iyo (yekubika) sisitimu yekudzora musoro wekunyora, uye yekuraira kumhanya ndeye 20-45 zvidimbu paminiti. Chine otomatiki yekudhindisa machina inodzorwa ne (servo) system nekumhanya kwezvimedu makumi mana nemakumi mana nemashanu paminiti. Kubudirira kwakasiyana, gohwo rakasiyana nemasikirwo.
(2) Maitiro ehafu-otomatiki ekutsikisa machina ekutsikisa musoro kazhinji inofanirwa kuitirwa nezvigadzirwa zvemaoko, ine yakakura yekukanganisa mhando uye kuoma mukutonga iko kurongeka. Uye otomatiki yekudhindisa machina inotora yakamira yakafanana pepa kunyora, otomatiki nzvimbo yekuparadzanisa, kunyora kurongeka kwe1mm.
(3) Yakawanda yehafu-otomatiki yekudhindisa machina ekutsikisa musoro, zvigadzirwa zvekuravira zvine mashoma, pasina izvo zvikamu zvakasarudzika zvinongogona kushandiswa muchina imwechete, saka inonyanya kushandiswa muzvivakwa zvidiki zvevashandi. Chine otomatiki yekutsikisa manhamba kwakasiyana, michina yacho ine mabasa akasiyana siyana, ayo anogona kushandiswa zvakasiyana siyana uye hukuru hwezvigadzirwa mune imwecheteyo indasitiri, uye kuisa zita munzvimbo dzakasiyana.
Chishandiso ichi chakaiswa nemusoro wakanyorwa chaiwo, unokwanisa kutenderedza marita paX, Y uye ax ax. Paunenge uchinyora mavara, bheji rinopfekedza tambo yemugadziro wekugadzira rinoshandiswa senge tafura inoshanda, uye zvigadzirwa zvinounzwa zvakanyorwa neicho chaiyo nzvimbo yekuona kweziso. Kururamisa ndeye ± 1 mm. Midziyo yacho ine basa rekusaita kunyora uye kuita wega zvinyoronyoro pasina kudhinda.
Kazhinji, kudhindisa manipulator zvishandiso kunogona kubatirirwa kune zvakasiyana zvigadzirwa zvendiza, arc uye zvimwe zvinzvimbo. Dzimwe nzvimbo dzekuravira dzemusoro wekunyora dzinogona kuchinjwa zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi, uye zvinowirirana zvinowedzeredzwa uye kuunganidzwa kuti zviwanikwe kuita kwakasiyana-siyana kwekuverenga.